Reid မှ Rebuttal အပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ၏မှတ်ချက်၊ et al - Your Brain On Porn
Reid မှ Rebuttal အပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ၏မှတ်ချက်
ရိဒ်, et al ဆက်ဆက်အားလုံးမဟုတ် compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ငါဟီလ်တန်နှင့် Watts အကြံပေးခြင်းများနှင့်ဆေးဝါးမှအကြိုးခံစားသူကိုထိုကဲ့သို့သော AIDS ရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအဖြစ်အလေးအနက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုရှိတယ်လို့သဘောတူမယ်လို့သေချာပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့လညျး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်ပေါ်မှာသူတို့ထဲကအနည်းငယ်ကိုကြည့်ပါ။ ငါတို့သည်လည်းအဲဒါကိုဒီ hypofrontality သုတေသန၏ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြအတွက်ဟီလ်တန်နှင့် Watt ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုခဲ့သံသယရဲ့သော်လည်း, သူတို့သည်ထာဝရဦးနှောက်ပျက်ဆီးပြီဆိုလိုမှပြန်လည်ထူထောင်သူတို့အားအထောက်အကူဖြစ်စေမဟုတျကွောငျးသဘောတူသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ Reid, et al ကြောင့်စိတ်ပူပန်နေ compulsive porn ကိုအသုံးပြုခြင်း * * ဦးနှောက်ထဲမှာစွဲဖြစ်စဉ်များအထဲကပေါ်ထွန်းတော်မမူကြောင်းငြင်းခုံခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ရိဒ်မိမိအဘို့ clients များဆကျဆံ "porn မှီခို။ " အကယ်စင်စစ် "မှီခို" ဟုအဆိုပါဦးနှောက်အတွက်အလုပ်မှာစွဲဖြစ်စဉ်များပေါ်ထွန်း။
ကံကြမ္မာတစ် fluke မှတဆင့်, ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မငါးနှစ်ပြန်လည်ထူထောင် porn အသုံးပြုသူများအရာပေါင်းများစွာကိုနားထောင်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုအိမ်တွေကိုသွားပြီးဧည့်သည်တစ်ဦးစေီးကွောငျးအဖြစ်စတင် (မကြာမီအခမဲ့ပြီးနောက်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း streaming အားလုံးအသက်အရွယ်မှမရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်), မြစ်သို့ကျယ်လာပြီးနှင့်ရေလွှမ်းမိုးဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ပုံရသည်သိရသည်။
စာရှုသူများအ OCD လူနာဆကျဆံသူကိုစိတ်ရောဂါဂျက်ဖရီအမ် Schwartz ၏လုပျငနျးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပေမည်။ သူကသူတို့ရဲ့အပြုအမူစိတ်ဖိစီးမှုများက activated ရရှိသည့်မလိုချင်တဲ့ဦးနှောက်ကွင်းဆက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်။ သူကသူတို့ကသုံးပြီးရပ်တန့်ပါကအားနည်းသွားလိမ့်မည်ဟုကရှင်းပြသည်, သူတို့ကအခြားလှုပ်ရှားမှုများကို၏ညှနျကွားမှာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ rewiring မြန်ဆန်ဖို့နည်းစနစ်ပေးသည်။
ကြောင့်ကျနော်တို့အခြားစီမံကိနျးအတှကျစုဆောင်းခဲ့သုတေသနမှကျနော်တို့ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အပူတပြင်းခဲ့ကြသည်တော်မူသောငါတို့၏ဧည့်သည်များနှင့်အတူဒီနှင့်အခြား, ဦးနှောက်-plasticity သဘောတရားများကို share ရန်အနေအထားရှိကြ၏။ ကြှနျုပျတို့သညျ ", ပြန်ဖွင့်" ဟုအဆိုပါအယူအဆ "rewiring" နှင့်ဟုအမည်ပေးထားသည့်သို့မဟုတ်သာမန် sensitivity ကိုမှဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ပြန်လာ။ (အသေးစိတ်များအတွက်: https://www.yourbrainonporn.com/your-brain-on-porn-series) အတော်များများပြန်လည်ထူထောင်နေကြသည်။ (ဤနေရာတွင်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများ: https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts ရှည်လျားတဲ့ကဒီမှာအကောင့်: https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts)
စိတ်ဝင်စားစရာကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ယာနျဘာသာတရားကိုသို့မဟုတ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ (အနည်းငယ်သင်္ချိုင်းတွင်းပြဿနာများကိုရှိပေမယ့်) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဘုံထဲမှာနည်းနည်းရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ဘုံရှိသူတို့အောက်ကခုနစျပါးမေးခွန်းများအားလုံးဖြေကို '' ဟုတ်ကဲ့ 'အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (DSM-IV) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုများအတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (ICD-10) စံကနေရေးဆွဲမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ထဲကမှသုံး '' ဟုတ်ကဲ့ '' ဖွကွေားခဲ့လျှင်, ကိုယ့် / သူစွဲနေသည်။
1) စာနာထောက်ထားရေး။ သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအချိန် (တင်းမာမှု) ကျော်တိုးမြှင့်ခဲ့ဖူးပါသလား
2) Withdrawal ။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်အစဉ်အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာကြုံတွေ့ကြသနည်း သငျသညျကိုအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများမဆိုရှိခဲ့ရှိသည်: ယားယံခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ချွေး, ပျို့, ဒါမှမဟုတ်အန်ချောက်ချား?
3) ခကျခဲသည်သင်၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်။ သငျသညျတစ်ခါတစ်ရံထက်ပိုသို့မဟုတ်သင်ချင်ပါတယ်ထက်ပိုရှည်အချိန်များအတွက်အသုံးပြုပါသလား
4) အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များ။ သငျသညျအနှုတ်လက္ခဏာသင့်ရဲ့ခံစားချက်မှအကျိုးဆက်များ, Self-လေးစားမှု, ကျန်းမာရေး, အလုပ်, သို့မဟုတ်မိသားစုတှေရှိခဲ့တယျသော်လည်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ရှိပါသလား?
5) လှုပ်ရှားမှုများလျစ်လျူရှုထားသို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်း။ သငျသညျအစဉျအမွဲဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုချွတ်ပယ်သို့မဟုတ်လူမှုရေး, အပန်းဖြေ, အလုပ်လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုလှုပ်ရှားမှုများပြီလော
6) သိသာထင်ရှားသောအချိန်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အသုံးနှင့်။ သငျသညျစီစဉ်သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်, ဖုံးကွယ်, အသုံးပြု. ရယူအချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏကိုသုံးစွဲရှိပါသလား? သင်အသုံးပြုနေတဲ့စဉ်းစားအချိန်အများကြီးဖြုန်းရှိပါသလား? သငျသညျအစဉျအမွဲဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချပြီလော သငျသညျအစဉျအမွဲဖမ်းမိတဲ့ရှောင်ရှားရန်အစီအစဉ်များစဉ်းစားဖူးသလော
ခုတ်လှဲရန် 7) Desire ။ သငျသညျတခါတရံခုတ်သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်စဉ်းစားဖူးပါသလော သငျသညျအစဉျအမွဲခုတ်လှဲသို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်မအောင်မြင်ကြိုးစားမှုကိုဖန်ဆင်းပြီလော
တစ်ခုစွဲဖြစ်စဉ်ကိုထက်အခြားအဘယ်အရာဖြစ်နိုင်သမျှဦးနှောက်ယန္တရား, အဲဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးကြုံနေရ compulsive porn အသုံးပြုသူများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ဒါဟာကောင်းစွာဓာတုနှင့်အမူအကျင့်နှစ်ခုလုံးကိုစွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောဦးနှောက်လမ်းကြောင်းနှင့်အလားတူယန္တရားများပါဝင်မြဲမြံစွာတည်သည်။ တကယ်တော့, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းလာမည့် DSM အတွက်သစ်ကို "စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ် Disorder 'section မှာနေရာချပါလိမ့်မည်။
အဖြစ်ဇီဝကမ္မကိစ္စ "စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်" ဤဘုံလက္ခဏာတွေရှင်းပြဖို့မရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားမည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုထူးခြားတဲ့ကထောက်ခံခံရဖို့လိုအပျမညျဖွစျသျောလညျးစူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောအဖြစ်, ဦးနှောက်ယန္တရားတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များအတွက်, သည်းခံစိတ်သေချာပေါက်ပိုပြီးနာရီနေ့အဘို့စောင့်ကြည့်၏ပုံစံကိုယူမထားဘူး။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏နောက်ခံတိမ်းညွတ်ကိုက်ညီမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing, ပိုင်းတွင် watched နှင့်စှာနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်, လျှော့ချကြတော့မှပစ္စည်းမှတင်းမာမှုများ၏ပုံစံကိုယူလေ့ရှိတယ်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များအနေဖြင့်စုဆောင်း Self-အစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ပါ: https://www.reuniting.info/download/pdf/0.TOLERANCE.pdf ။ )
, စိတျအပွောငျးအလဲ, ဦးနှောက်မြူ, တုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ, အမျက်ဒေါသ၏ပြီးတော့ Activision နေတာလှုပ်, ပြင်းထန်သောခေါင်းကိုက်: သူတို့ (အမှုများစွာအတွက်အမှန်တကယ်သူရဲကောင်းအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်) ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့လည်းမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေမှအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလားတူဖြစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ အစွန်းရောက်စသည်တို့ကိုလိင်စိတ်ပြောင်းလဲမှုများ, (Self-အစီရင်ခံစာများ: ။ https://www.reuniting.info/download/pdf/0.WITHDRAWAL.pdf) ဤရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ်သည်းခံစိတ်၏သက်သေသာဓက, အရှိဆုံးယုတ္တိနည်းအစွဲများကရှင်းပြထားသည် -processes ။
ရိဒ် et al ၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအများကြီးရှိသည်, စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်များ '' ရလဒ်တွေကိုတစ်ဦးမပြကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး," စွဲဖြစ်စဉ်များကိုသူတို့ compulsive porn အသုံးပြုမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်မဖွစျနိုငျသောကွောငျ့ဟုခံရဖို့ပုံရသည်။ ကျနော်တို့လေးလေးစားစားထိုသို့သောအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများနှင့်ယနေ့ hyperstimulating အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စွဲမှ Pre-ရှိပြီးသားဓာတ်သဘာဝစစ်ကူ၏အစွန်းရောက်ဗားရှင်း, မှကြွလာသောအခါသူတို့ဥစ္စာချိုးဖောက်နေကြသည်သကဲ့သို့သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်တင်ပြလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ * အများဆုံး * လူများ, မခွဲခြားဘဲမျိုးဗီဇအားနည်းချက်၏အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာအပေါ် gorging ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်ဖြားယောင်းအစဉ်တ္ထု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအပေါ် binging မှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိသာသည်။ (ထိုကိစ္စအတွက်သို့မဟုတ်ခြင်းတောင်းဘောလုံးကိုဂိမ်းများ,) junk အစားအစာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း "ရုံအစားအစာနှင့်လိင်" မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြောင်းပြချက်သူတို့ကဦးနှောက်ရဲ့သာမန်မွတ်မပြေနိုင်သောယန္တရားပယ်ဖျက်ဖို့ပါဝါရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသနအရှင်အလှည့်အတွက်, Bing ဖို့တိုက်တွန်းမောင်းသောဦးနှောက်ရဲ့အပျြောအပါး sensitivity ကို, numbing သူတို့ D2 receptors လျှော့ချခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုမြဲမြံစွာတည်ခဲ့သည်။ ဤသည်ယန္တရားတန်ဖိုးရှိသောကယ်လိုရီသို့မဟုတ်ဝတ္ထု, မြေဩဇာကောင်းသောအိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဝှမ်းအများကြီးရှိခဲ့သည့်အခါရှားပါးအခါသမယအပေါ်မူးရူးကြှနျုပျတို့၏ဘိုးဘေးမြားကို enable လုပ်ဖို့ပြောင်းလဲကြပေမည်။ အိုကဒီနေ့ရဲ့ဖြားယောင်းကြွယ်ဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်အားနည်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောအရွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းမရှိသော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်အမေရိကန် ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အဝလွန်နေပြီးအဝလွန်သူများ၏ထက်ဝက်ရှိသည်။ (http://www.globalpost.com/dispatch/health/79/fat-top-101119-obese တွင်ကြည့်ပါ။ ) Porn ကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်လူငယ်ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူများ၏စစ်တမ်းအရယောက်ျား ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_10=EJ2008&ERICExtSearch_SearchType_87=no&accno=EJ31 ကိုကြည့်ပါ) လူငယ်ဆယ့်ငါးယောက်ရဲ့စစ်တမ်းအသစ်က ၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူငယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများ၊ အမျိုးသမီးများသည်ပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားသုံးစွဲသူများအကြားပြproblemsနာများတင်ပြသောအမျိုးသားများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်ပိုမိုများပြားသည်။ (http://www.bioportfolio.com/resources/pmarticle/0/Prevalence-Severity-And-Correlates-Of-Problematic-Sexual-Internet-Use-In-Sw Swedish-Men.html နှင့် http: // www ကိုကြည့်ပါ။ informaworld.com/smpp/content~content=a781137~db=all~jumptype=rss ။ ) ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ နှင့် Medhelp နှင့်တူသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်။ Yahoo အဖြေများ။
ကျနော်တို့ porn-ပြဿနာစစ်တမ်းများအလေးအနက်ထားယနေ့အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့အမှန်တကယ်ပြဿနာများ underreport စခွေငျးငှါယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့အပျိုဖော်ဝင်စကနေသို့မဟုတ်မတိုင်မှီက masturbating ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရှိပါကငယ်ရွယ်အသုံးပြုသူများကိုအလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လက္ခဏာတွေအများဆုံးချိတ်ဆက်ဖို့အတှကျအလှနျခကျခဲသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤဆိုသညျကား "သာမန်။ " ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံအရသူတို့ကဆည်းပူးမဟုတ်လျှင် သူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်ဖို့ရာအတွင်းတစ်ဦးစွဲ-ဖြစ်စဉ်ကိုမူဘောင်, သူတို့ကရိုးရိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, ဒါမှမဟုတ်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်နှင့်ပိုပြီးစိတ်ပျက်စရာပစ္စည်းများအတွက်အလိုဆန္ဒ porn သူတို့ရဲ့မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေ, porn ရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ဘဲဦးနှောက်အပေါ်ရေတိုရေရှည်နှစျသိမျ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ပြဿနာနှင့်တူပုံရသည်။
ဝမ်းသာစရာသူတို့ (1) အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဟာသူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနားလည်သဘောပေါက်တစ်ချိန်က recover သည်ဤယောက်ျားတွေအတော်များများထားပြီးစွဲ-ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်သုံးပြီးဆယ်ယူခဲ့ကြသောလူတို့၏သူတို့အားအလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, (2) က "ပြန်ဖွင့်" ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွား ။ သူတို့ရဲ့အရသာဟာသူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကအရသာမှပြန်ပြောင်းလာသောအခါသူတို့သည်အလွန်စိတ်သက်သာရာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာတသမတ်တည်းလျှော့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်သတင်းပို့ပါ။ (အတော်များများကသူတို့အခမဲ့ streaming ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လေးလံသောအသုံးပြုမှုသို့ချော်ကျသောအခါစိတ်မသက်သာလူကန်လန်သို့၎င်းတို့၏အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့်စဉ်းစားရခက်နေသော extroverts ခဲ့ကြသည်။ ) ရုပ်သိမ်းရေး၏ကနဦးသောဝဒေနာ recedes ပြီးနောက်သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်, တိုးတက်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှုသတင်းပို့ပါ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် (သူတို့ porn သရုပ်ဆောင်များကို / မင်းသမီးအဖြစ်နှိုးဆွသောအဖြစ်မဟုတ်ကြမတိုင်မီအခါ, ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ဖို့စတင်သူ) အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်၏အမြင်၌မိမိတို့အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်အံ့သြနေကြသည်။
ကျနော်တို့ကအများကြီးအသုံးပြုသူများကိုတိကျစွာသူတို့အပေါ်မှာ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာစွဲမော်ဒယ်များ၏ aptness ထုတ်ဖော်ပြသသောကွောငျ့ကြောင်းပြသနေသောကြောင့်တဦးတည်းသီးခြားလက္ခဏာ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အတိမ်အနက်အတွက်သာဖြေရှင်းချင်ပါတယ်။ သူတို့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားလာသောအခါလိင်ဖျော်ဖြေဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနေချိန်မှာအတော်များများကတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရှာပါ။
ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်တရားခံဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိရ။ သူတို့အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ (dopamine မမှန်မကန်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းတို့အကြားပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.yourbrainonporn.com/erectile-dysfunction-and-porn) တွင်ကြည့်ရှုပါ။ များစွာသောဆရာဝန်များထံသွားပြီးစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ” သူတို့ရောသူတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကလည်းညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရင်းအဖြစ်မသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ အမှန်မှာဆရာဝန်များက“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး” ဟုအာမခံသည် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အင်တာနက်ကိုအလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မဆက်စပ်မီဤအရာသည်မှန်ကန်ခဲ့သည်။ အဲဒါမမှန်တော့ဘူး။ အမှန်မှာ၊ အီတလီဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်များက“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အင်တာနက်ယောက်ျားများသည် 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနူးရီးယားရောဂါ' ခံစားနေရသည် "http://www.ota.it/web/notizie/rubriche/english/2011/02/24 /visualizza_new.html_1583160579.html ။
ဤရွေ့ကားဧည့်သည်များ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာ, သူတို့ရဲ့ 20s အတွက်သူတို့ထဲကအများစုဟာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ 30s နှင့် 40s အများအပြား။ သူတို့ဟာစသည်တို့ကိုပညာရေး, ယာနျဘာသာတရားကို, စိတ်နေသဘောထား, တန်ဖိုးများ, အစားအစာ, ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်ကွာခြားဒါပေမဲ့သူတို့ကဘုံထဲမှာအရာနှစ်ခုရှိသည်: ဒီနေ့ရဲ့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏လေးလံသောအသုံးပြုခြင်းနှင့်သည်းခံစိတ်တိုးပွားလာ။
(ဒါနီးကပ်စွာပထမဦးဆုံးမှာညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ကြိုးကြောင့်နှင့်တစ်ဦးသည်အချိန်ထွက်ရှိသော, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) သူတို့ porn ကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါကျနော်တို့တသမတ်တည်းသူတို့၏နာလန်ထူ၌ဤပုံစံကိုတွေ့မြင်:
1) Withdrawal လက္ခဏာတွေနှင့်မတရားသော: ချက်ချင်းပင်
2) လိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူ၏အပြီးအစီးဆုံးရှုံးမှု: တပတ်တဦးတည်း၏အဆုံးဆီသို့စတင်။
လိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူ၏ 3) မရှိခြင်း, တိုးမြှင့ flaccid ( "ကျုံ့သို့မဟုတ်မဲ့လိင်တံ"): porn အသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ပြင်းထန်မှုတို့အပေါ်မှာမှီခို, 2-6 ပတ် Continues ။
4) စသည်တို့ကိုအူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများ, စဉ်အတွင်းမပိုသည်အခြားအချိန်များတွင်နံနက်စိုက်ထူ, လိင်စိတ်နဲ့အလိုအလျောက်စိုက်ထူ၏တဖြည်းဖြည်းပြန်လာ, "သုတ်ရည်ယိုစိမ့်"
ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်လျှင်ပင် erectile ကျန်းမာရေး 5) အပြီးအစီးနာလန်ထူ, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒ, အလွန်ပျြောမှေ့စလိင်၏အစီရင်ခံစာ, အကြောင်းအရာကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။
လူကိုညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွက်တသမတ်တည်းလျှင်အားလုံးအချိန်အပိုင်းအခြားကျော် 6) (4 ရက်သတ္တပတ်မှ 12 ဖြစ်ပါတယ်။ 30 အထက်သူတို့အဘို့ရှည်နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပိုမိုတိုတောင်းကာလ။ https://www.yourbrainonporn.com/synopsis-of-entire-reboot-with-mood-chart: ဒီမှာစိတ်ဓါတ်များဂရပ်နှင့်အတူပုံမှန်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏အနှစ်ချုပ် Read
ဦးနှောက်တစ်ဘုံဇီဝကမ္မယန္တရားဖို့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, သူတို့ရဲ့ sequence ကိုနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်မှီခိုအားလုံးအမှတ်။ ဒါဟာ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း dopaminergic အာရုံခံအဆိုပါ hypothalamic စိုက်ထူစင်တာများကိုသက်ဝင်ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၌တည်ပါတယ်။ porn-သွေးဆောင် ED များအတွက်သာဇီဝကမ္မသံကိုယန္တရား mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏ desensitization ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအားလုံးသိကြစွဲဖြစ်စဉ်များတစ်အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်း Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု / ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် mesolimbic dopamine စနစ်ကအဲဒီဧည့်သည် '' ဦးနှောက်အတွက်လေးလံသောအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတုန့်ပြန်သေး Reversible လုပ်, အပြောင်းအလဲများကိုသိသိသာသာခံတော်မူကြောင်းကိုအကြံပြုထားသည်။ ရှိလျှင်သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှမိမိတို့ဦးနှောက်တစ်ကြွင်းသောအရာပေးသည့်အခါမသက်ဆိုင်သီအိုရီများနှင့်မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့အခြားကိစ္စရပ်များ၏, ထိုလူတို့ပြန်လည်နေကြသည်။
ဒါကသက်သေအထောက်အထားလည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းလိင်စွဲလမ်းရာမှသှေးကွဲပြားခြားနားကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ လိင်တစ်ဦးအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာဆုလာဘ်-circuit ကိုနှိုးဆွဖြစ်၏ အင်တာနက်က porn ကိုအနည်းဆုံးအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်-ပိုပြီးင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် junk အစားအစာကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့မှုအတွက်, ဒီလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု supranormal ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါတို့သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးယခုသူတို့အလေးအနက်ထားကြောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက်အလားအလာစွဲလမ်းမဟုတ်ပါဘူးအခိုင်အမာမှဂရုမစိုက်လျှင်သဘာဝကဆုလာဘ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားရှိကွောငျးသကျသပွေဖို့ Reid et al အပေါ်မှာကျိန်းဝပ်ထင်ပါတယ်။ သဘာဝကဆုလာဘ်များ superstimulating ဗားရှင်းဦးနှောက်ထဲမှာစွဲဖြစ်စဉ်များကိုသက်ဝင်နိုင်သောအထောက်အထားဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာနှင့်သကြားပါဝင်သောတိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းနှင့်ယခုလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာကိုနှစ်ဦးစလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူ့စမ်းသပ်ချက်အတွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ [ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ကိုးကား: https://www.yourbrainonporn.com/research-articles-and-abstracts]
ဤသည်ကဦးနှောက်ယန္တရားကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ( "porn အပျိုကညာ" ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်လျှင်) porn အသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်သို့ဂုဏျရညျတူဒီအတည်ပြုလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးအသတ်မရှိစောင့်ဆိုင်း၏အန္တရာယ်များကိုဒီနေ့ရဲ့အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အတိုင်းအတာများနှင့်အများအပြားသုံးစွဲသူလူငယ်သင်္ချိုင်းတွင်းကိုပေးအပ်ထားတယ်။ (Young ကဦးနှောက်ပို dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုပြီးပျော့နှင့်စွဲ-related အပြောင်းအလဲများမှဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/jocn.2010.21572?journalCode=jocn)
လူနာအခြားကိစ္စရပ်များရှိတောင်မှရှိရာ, အကြံပေးခြင်း ပို. အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသူတို့ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine ချိန်ခွင်လျှာပွနျလညျထူထောငျပါပွီပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်၎င်းတို့၏ဟန်ချက်ပြန်လည်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသူတို့ရှောင်ရှားကြစိန်ခေါ်မှုများအမျိုးမျိုးတို့ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြည့်ပါ။ စွဲလမ်းမှု၏သိပ္ပံပင်အရှက်ကွဲခြင်း-လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူသူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ "Forbidden" နှင့် "အန္တရာယ်" လှုံ့ဆော်မှုသဘာဝကျကျကြောင့် adrenaline များလွှတ်ပေးရန်မှအစိတ်အပိုင်းအတွက်, (စွဲ) သင်ယူခြင်းမြန်ဆန်။ ကြောက်လန့်ကိုလည်း dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဧည့်သည်ဤအမှုကိုနားလည်နိုင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအမြန်နှုန်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့အပြုအမူများအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
လူငယ်အများစုအသုံးပြုသူများ၏စိတ်ထဲတွင်ခုနှစ်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယခုပြောရလျှင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, hyperstimulating အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, မရှိဘဲဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ သုတေသန '' အသစ်အဆန်း 'နဲ့' ရှာကြံ '' အတော်လေးခြားပြီးပုံမှန်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည့် dopamine ကနေ, dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြောင်းပြသထားတယ်။ (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2838369/?tool=pubmed ကြည့်ရှုပါ။ ) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ထပ်ရေးခွင့်ပြု, စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းများနှင့်နာရီပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်ဘို့အမဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်တတ်၏ ဦးနှောက်ရဲ့သဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သောယန္တရားများမစိုက်။ ဒါကအန္တရာယ်ထူပြောသောအခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်တစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှုစံသုတေသနဆောင်ရွက်နေသည်ကိုပင်မှီ, အသုံးပြုသူများကိုချိန်ခွင်လျှာအဘို့အခုတ်မောင်းကိုကူညီအများကြီးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။